သံလွင်: မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ.၀င်တွေကို ဥရောပ သမဂ္ဂ အစီအစဉ်နဲသင်တန်းပေး
သင်တန်းမှာ လူစုလူဝေးကို စံနစ်တကျ ဖြေရှင်းတဲ့ နည်းလမ်းတွေ၊ ပြည်သူလူထုကို ပူပေါင်းပါဝင်ေ စပြီးြေ ဖရှင်းတဲ့ ရဲလုပ်ငန်း နည်းစံနစ်တွေ စတာတွေကို သင်ကြားမှာ ဖြစ်ပြီး ဂျာမနီ၊ အင်္ဂလန်နဲ. ဘယ်လ်ဂျီယံ နိုင် ငံက သင်တန်းဆရာတွေ ကိုယ်တိုင် လာရောက် ပို.ချတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ အရှေ.တောင်အာရှ အားကစားပွဲ မတိုင်ခင် ကျပ်ငွေ ၆ ဘီလီယံ အကုန်ခံပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ.ကို အဆင့်မြှင့်တင်မယ့် လုပ်ငန်းစဉ်နဲ. ဆက်စပ်နေတယ်လို. မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ.က ရဲတပ်ရင်းများ ကွပ်ကဲေ ရးမှုး ရဲမှုးချုပ် သူရဘိုနီက ပြောပြပါတယ်။
ဥရောပ သမဂ္ဂက နည်းပညာနဲ. ပစ္စည်း အကူအညီပေးတဲ့ ဒီသင်တန်းဟာ ၁၈ လ ကြာမြင့်မှာ ဖြ စ်ပြီး မြန် မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ.ကို နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ ရဲတပ်ဖွဲ. တစ်ခုရဲ. လုပ်ငန်းစံနစ်တွေအတိုင်း လုပ်တတ်ကိုင် တ တ်လာဖို. အထောက်အကူ ဖြစ်ကြောင်းလဲ သူက ပြောခဲ့ပါတယ်။
at 11/06/2013 12:09:00 AM